galmada afka inta aad uurka leedahay. | Gaaloos.com
Home » galmada » galmada afka inta aad uurka leedahay.
galmada afka inta aad uurka leedahay.
Qaar badan oo ka mid ah haweenka ka helay natiijada baaritaanka wanaagsan, oo ka walaacsan arrinta - haddii galmo inta aad uurka leedahay. Iyo, haddii ay sidaas tahay, sida waxaa u ammaano ee ilmaha.
Dhakhaatiirta aaminsanahay in galmada siilka la soo dhaqma kartaa dhalashada, haddii ay jirto halis ma dhicin ama wax kale heley. Maskaxda ku hay in galmo saamayn togan ku xaalladda jireed iyo maskaxeed ee qof dumar ah, sidaas darteed waa la siiyo ilaa muhiim ma aha. Galmo ugu ammaan ah oo raaxo leh loo tixgeliyo ee afka inta aad uurka leedahay haddii galmada waa u.
Galmo xilliga uurka ma loo baahan yahay si ay u joojiyaan ama xad -. Si ay dareensan caafimaad, qurux badan oo la jecel yahay in faa`iidada kaliya ee tan
Uurka iyo nolosha saaxiib
hooyooyinka Future ka walwalsan tahay in aad codsan kartaa in galmada afka uurka, inuu waxba ma yeeli doono ilmaha. Galmada afka xilliga uurka ma aha waxyeello oo kaliya laakiin sidoo kale waxtar leh, sababta oo ah markii uu shucuur wanaagsan idinkoo Junub ah in qof dumar ah oo uu helo, waxaa lagu kala qaadaa in ay foosha caloosha ku iyo minka, oo uu yahay, ma ka geysan kartaa dhalashada dhicis ah.
galmada 37 toddobaad ee uurka
Inta Hooyo mustaqbalka ka fogaadaan galmada inta aad uur leedahay ka dib 37 todobaad, isagoo ku dooday in cabsi dhalashada dhicis, khasaaro ah ee calooshaada weyn, ka dhawrsada cudurka sidato. Daawo casriga ah ayaa waxa uu mamnuucayaa ma aha oo kaliya inta lagu jiro galmada toddobaad ee la soo dhaafay ee uurka, laakiin sidoo kale si adag ku talinayaa in, inta labada lamaane sida ay yihiin kuwo caafimaad qaba, daacadnimada xuubka aan la jebiyey, oo naagtii waxay ku ma xanuun ma dareemayo. Haddii ugu yaraan hal xaalad aan la kulmay, waxaa suuragal ah in dumarka uurka leh in ay galmo afka ah, oo ay naagtu ku maayo xiiso leh oo keliya, laakiin qaar ka mid ah u isticmaasho uur, sida ay aqoonyahanadu.
galmada afka inta aad uurka leedahay waxaa suurtagal ah
cilmibaadhe oo Maraykan ah ku talinaynaa in galmada afka uurka leh in laga takhaluso saamaynta ku sumowga meerkurida iyo hoos u of pre-eclampsia - shuruud u ah qof dumar ah oo uur leh, taas oo borotiinka ku jiraa kaadida oo kordhay dhiig-karka. Oo kanu waa kaftan lahayn, isticmaalka naagtii ninka shahwadu waa faa`iido dhan ah jirkeeda oo dhan iyo, gaar ahaan, waxay ka caawisaa in laga takhaluso walac.
Gebogebadii, waxaan ku soo koobnay in galmada afka inta aad uurka leedahay waxaa lagaga dhaqmayaa karo iyo in qof dumar ah ma dareemaan sumacadiisii ​​iyo "puzatenky" oo gartay in ay jecel yahay oo la doonayo.
Title: galmada afka inta aad uurka leedahay.